कोरोना जितेर फर्किएँ बाबु ! प्रहरीले घरसम्मै पुर्‍याइदिनुभयो - Alert Khabar
Homeसमाचारकोरोना जितेर फर्किएँ बाबु ! प्रहरीले घरसम्मै पुर्‍याइदिनुभयो
काठमाडौं । धवलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ६५ वर्षीया वृद्धा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् ।
पछिल्लोपटक कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि वृद्धा शनिबार अपराह्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको बताएकी छन् ।
बाह्रखरीसँग खुसी साट्दै वृद्धाले कोरोनालाई पराजित गरेर फर्किएको प्रतिकृया दिएकी छन् ।
“जाँच गर्दा कोरोना नदेखिएपछि डाक्टरहरूले घर जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । अस्पतालमा लिन छोरो र ज्वाइँ जानुभएको थियो । प्रहरीले घरसम्मै पुर्‍याइदिनुभयो । औधी खुसी लागिरहेको छ । सुरुमा त के हुने हो, कसो हुने हो लागेको थियो,” उनले भनिन् ।
राम्रो उपचार गरेको भन्दै उनले चिकित्सक, नर्स र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिएकी छन् ।
“गरेर हुने उपचार गर्नुभयो । उपचार गर्दा पनि राम्रो बोलीवचन, स्याहार गर्नुभयो । तपाईंको आत्मविश्वास दह्रो छ, केही हुँदैन तपाईंलाई भन्नुभयो,” उनले खुसी व्यक्त गर्दै भनिन् ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा खुसी थाम्न नसकेको उनले बताइन् । लामो समयदेखि दमको रोगी रहेकाले त्यतिबेलै सास बढेको उनले सुनाइन् ।
“धेरै कुरा बोल्न मन थियो । डाक्टरहरूलाई धन्यवाद भन्नु थियो । त्यतिबेलै दम बढ्यो । घाँटी अँठ्याएजस्तो भयो । खुसी भएर होला,” उनले भनिन् ।
चिकित्सकहरूले थप १४ दिन छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बस्न र परिवारको सम्पर्कमा नजानु भनेर अह्राएकाले आफूले त्यसै गर्ने उनको भनाइ छ ।
“डक्टरहरूले भनेजति दिन छुट्टै बस्छु । अहिले कान्छा छोरा–बुहारीसँग बस्दै आएको छु । अर्को छोरोका घर अलि माथि छ । परिवारमा सबै खुसी छन्,” उनको भनाइ थियो ।
उनीसँगै एउटै उडानमा आएकी काठमाडौंकी प्रशिद्धी श्रेष्ठ पनि आजै डिस्चार्ज भएकी छन् ।
वृद्धासँगै आएकी नाताले नातिनी पर्ने किशोरी धवलागिरी प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमै उपचार भइरहेको छ । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो स्वास्थ्य ठीक रहेको र डिस्चार्जको प्रतीक्षामा रहेको बताएकी छन् ।
किशोरीको पछिल्लो रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ नै देखिएको छ ।